घरमा HIIT रुटीन - तपाईको शरीरलाई आकार दिन्छ बेजिया
सुसाना Godoy | | व्यायाम
उच्च तीव्रता कसरत सबैको सब भन्दा धेरै माग गरिएको हो। केहि भन्दा बढि किनभने केहि मिनेटको साथ, हामीसँग राम्रो दिनचर्या हुनेछ। यस अवस्थामा हामी एक बनाउँछौं HIIT दिनचर्या घरमा र हामी भन्छौं, कुनै बहाना छैन, किनकि यसले सायद समय लिनेछ।
यदि तपाईं चाहानुहुन्न वा जिम जान सक्नुहुन्न भने, तपाईंसँग घरमा पहिले नै नयाँ प्रेरणा छ। तपाई लामो समयदेखि प्रशिक्षण लिईरहनुभएको छ वा छैन भन्नेमा निर्भर गर्दै, तपाइँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नै तालिका डिजाइन गर्नुहोस् HIIT। हामी तपाईंलाई एक विचारको साथमा छोड्छौं जुन तपाईं अब अभ्यासमा राख्न सक्नुहुन्छ!
1 जम्पिंग ज्याकको साथ तपाईंको HIIT तालिका सुरू गर्नुहोस्
6 बक्सि the हावामा पञ्चहरू
जम्पिंग ज्याकको साथ तपाईंको HIIT तालिका सुरू गर्नुहोस्
याद गर्नुहोस् कि हाम्रो दिनचर्याहरूसँग पूर्ण रूपमा सुरु गर्नु अघि थोरै तन्काउनु महत्त्वपूर्ण छ, यसैले भविष्यमा हुने घाइतेहरूलाई रोक्दछ। जब हामी तयार हुन्छौं वा तयार हुन्छौं तब हामी यी जम्पहरूको साथ सत्र सुरू गर्दछौं, जुन सम्पूर्ण विश्वलाई चिनिन्छ। हाम्रो खुट्टा संगै खडा, हामी हाम फाल्ने, हाम्रो खुट्टा फैलाउने र हाम्रो हतियार उठाउनेछौं। अर्को जम्पको साथ, हामी सुरूवातमा फर्कन्छौं, अर्थात् हामी हाम्रा खुट्टाहरू सँगै ल्याउँछौं र फेरि हाम्रो पाखुरा तल दिन्छौं। हामी एक गर्छौं Second० सेकेन्ड र हामी आराम गर्छौं तर पूर्ण रूपमा होइन, तर अर्को व्यायाममा जानको लागि समान स्थानमा कदम चाल्नु उत्तम हुन्छ।
तिनीहरू अनुपस्थित हुन सक्दैन र यसैले, तपाईं जहिले पनि फिट देख्नु भएको समयमा उनीहरूमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू छोटो अन्तराल र सबै छिटो हुन्छन्। तर स्क्वाट तिनीहरू पनि यसको नुनको मूल्यको कुनै पनि तालिकामा उपस्थित हुनुपर्दछ। यो हाम्रो शरीर को लागी असंख्य फाइदाहरु छ, मांसपेशिहरु को मजबूत बनाउन र शरीर को बोसो को हटाउने। तपाईले ती कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ, साधारण वा केही वजन थप्न यदि तपाईं पहिले नै अनुभवी हुनुहुन्छ भने।
यो व्यायामको साथ हामी दुबै शक्ति र सहनशीलता र समन्वय कार्य गर्दैछौं। त्यसोभए यो हामी पूर्ण रूपमा अर्को पनि हो किनकि यहाँ हामी दुवै हात र काँधहरूका साथसाथै नितंबहरू, बाछाहरू, एब्स, आदि पनि समावेश गर्दछौं। राम्रो कार्डियो व्यायामको सबै प्रोत्साहनहरू हुनुको साथै। हामीले गर्न सक्षम हुनको लागि खडा छोड्यौं जमीनमा फ्लेक्स, उठ्नुहोस् र एक सानो जम्प लिनुहोस्। तपाईं निश्चित रूपमा यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ! सुरुमा यो सत्य हो कि यो एक सानो बिस्तारै गर्नु सँधै राम्रो हुन्छ, तर अलि अलि गरेर तपाईंले सही ताल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईंको खुट्टा र ग्लुटहरू यस्तो व्यायामको लागि धन्यवाद दिन्छ। हुनसक्छ हामी यसलाई स्क्वाटसँग संयोजनमा राख्न सक्दछौं। तर यो एक धेरै सामान्य हो। जस्तो यसको नामले सts्केत गर्दछ, हामी उभिन थाल्छौं र त्यसपछि एउटा खुट्टा अगाडि राख्छौं तर सधैं शरीरसँग सिधा। यो व्यायाम संग तपाईं हुनेछ लचकता सुधार गर्नुहोस् र सन्तुलन पनि, सँधै आसन सुधार गर्दै।
यस मामला मा, यो सत्य हो कि हामी सधैं आधारभूत ABS को बारे मा सोच्दछौं, तर यो जस्तो क्षेत्रको काम गर्न हामी तथाकथित स्ट्यान्ड एब्सलाई पनि अप्ट इन गर्न सक्छौं। तिनीहरूसँग हामी मूल क्षेत्र पनि काम गर्नेछौं। यस जस्तो HIIT तालिका भित्र, यसलाई विचार गर्न अर्को विकल्प हुन सक्छ। तपाइँ आफैंलाई एक लोचदार ब्यान्डको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, जब तपाइँ यसलाई तान्नहुन्छ, तपाइँ एउटा खुट्टा उठाउनुहुन्छ र फेरि अर्को, घुडा घुमाउँदै। एक तरफ र त्यसपछि अर्कोमा तन्काएर व्यायाम गर्नुपर्दछ कि भुक्तानहरू बिर्सनु हुँदैन। समतल पेटको लागि एशियाई व्यायामहरू पनि जोशमा छन्। ठिक छ, यहाँ तपाईं केहि प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
बक्सि the हावामा पञ्चहरू
यो सत्य हो कि HIIT प्रशिक्षण समय भयो। Seconds० सेकेन्ड पछि, हामी थोरै आराम गर्दछौं तर हाम्रो मुटुको दरलाई कम गरिन अर्को अभ्याससँगै जारी राख्न। तपाइँ धेरै श्रृंखलाहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर अलि अलि सुरू गर्दै। त्यो भने, अन्य आधारभूत अभ्यास को रूप मा हावा हिर्काउने छ बक्सिंग। दुईको मुठ्ठी मुखबाट शुरू गर्दै, त्यसपछि हातहरू एक पछि अर्को तानेर अघि बढाउँदै। मांसपेशी टोन साथै सर्कुलेशनमा सुधार गर्दछ र एकाग्रतालाई बढावा दिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » व्यायाम » HIIT दिनचर्या घरमा: कुनै बहाना छैन!